प्राधिकरण कार्यकारी अधिृकत ज्ञवालीलाई अवकास, नयाँ कार्यकारी प्रमुखमा पोखरेल | Indrenionline.com
प्राधिकरण कार्यकारी अधिृकत ज्ञवालीलाई अवकास, नयाँ कार्यकारी प्रमुखमा पोखरेल
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठक आज बुधबार सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी अधिृकत सुशीलराज ज्ञवालीलाई अवकास दिने निर्णय गरेको छ ।
अवकास पाएका सिइओ सुशीलराज ज्ञवाली
बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय बिदाको पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।
नवनियुक्त सिइओ डा. गोविन्द पोखरेल
कुन दिवसमा राष्ट्रिय बिदा दिने, कुन दिवस र पर्वमा प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा बिदा दिने भन्नेबारे सुझाव पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
आजको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पूनर्निर्माणका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्तिकाृ अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुको करार अवधि एक वर्षको हुने पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।